Ukucacisa Amaxesha Okugqibela 'Okulandelana' - Ukulandelelana
Ukucacisa Amaxesha Okugqibela 'Okulandelana'
Ngexesha apho abanye abagxeki baye baqala ukuzibuza ukuba ngaba Ukulandelelana Basenokubambeka kuluhlu olubalisayo njengoko abantwana bakwaRoy bephakama kwaye ngokungathintelekiyo bawe kumjikelezo kayise, uLogan, uthotho lwe-HBO oluphumelele u-Emmy luzame isandla salo kwinto entsha ngokupheleleyo kwisiqendu sokuqala seCawa: i-cliff-hanger. I-Chiantishire ivala kunye noJeremy Strong's Kendall Roy eyedwa kwaye ehamba echibini lesafire yaseTuscan, ebonakala ngathi ikwicala lokuzintywilisela kunye nosizi lwakhe ngokulungileyo. Ngaba i Ukulandelelana iqela kunokwenzeka ukubhala ophumeleleyo Emmy ngaphandle show? Ngaba umboniso ungaphila ngaphandle kweKendall? Ngaba iya kuba yinto ehlekisayo kunye nentlekele ebumnyama kangaka kwindawo yayo? Kwelinye icala: Ngaba Ukulandelelana Ngaba ungasishiya nalo mfanekiso wokuvala ukurhola umva ukusuka kumphetho wokugqibela?
Kukho imikhondo embalwa-kumboniso kunye nodliwanondlebe kunye nabadlali kunye nabasebenzi-enokuthi ibonise kakuhle ukuba ngamakhethini e-Kendall. Xa ebuzwa ngokuthe ngqo ngayo ngexesha lodliwano-ndlebe lwakutsha nje kunye Iifilimu ezintsha 's IPodcast yeTV edumileyo , umlawuli wesiqendu kunye Ukulandelelana umvelisi olawulayo uMark Mylod, ngokungathandabuzekiyo, wabaleka enika impendulo ethe ngqo. (Kuphi ulonwabo kwimpendulo ethe ngqo?) Andifuni ukukhokela ubungqina, utshilo uMylod. Kodwa ngokwemiqathango yeKendall, ndinexhala ngaye. Le arc ethile yexesha kunye nomlingiswa kaJeremy ibuhlungu kakhulu. Sasicinga ukuba unayo, uyazi, wayecinga ukuba unayo. Akazange abe kwindawo engcono yokudlula loo ndlu, ukubaleka. Kwizithethe ezikhulu zentlekele ekhwankqisayo [ye] iziphene zakhe ngokuthe ngcembe ukutsala umbhoxo kweso sinokubakho salo naluphi na uhlobo lwenkululeko kubuhlungu.
Ukufunxa emanzini: Ukwaphula isiqendu 8 'sokulandelana'
Isicatshulwa esiya kutshintsha 'ukulandelelana' ngonaphakade
UMylod ukhankanya intlekele enkulu, kwaye, ewe, iqela lethiyetha kunye nelokufunda kakuhle Ukulandelelana uyazithanda iintetha zabo kuWilliam Shakespeare. Olona qhagamshelo lucacileyo belusoloko lulolukaShakespeare UKumkani uLear , olandela ukumkani ogulayo nabantwana bakhe abathathu nombuzo wokuba omnye wabo ukufanelekela kangakanani ukuhlala etroneni. Kuloo mdlalo, oyena mntwana umdala, uGoneril, uzibulala engekho eqongeni. Kolunye udliwano-ndlebe no IPrestige TV Podcast , U-Lorene Scafaria, owalathisa i-Episode 7, ubhekiselele ku-Kendall njengendibaniselwano ye-Shakespeare's Hamlet kunye ne-Macbeth. Isilumkiso se-Spoiler: Akukho namnye kwaba bafana owenza umdlalo wabo ephila.
Kodwa ngeli xesha lonyaka Ukulandelelana Uye wabeka uKen njengomntu obuhlungu obuyela emva ngakumbi kunoShakespeare. Onamandla wabhekisa kwisimo sakhe njengo umsindisi kudliwanondlebe lwangaphambi kwexesha, kwaye njengoKen ojonge ngamehlo abomvu njengoko kunokuvakala, unyana kaLogan unokuba nguYesu Krestu kolu ngcelele. Kwakukho isicwangciso esibuhlungu sokubethelelwa kukaKendall esenzela yena kwitheko lakhe lokuzalwa leminyaka engama-40, kodwa kwakhona umzuzwana ngaphambili kwixesha lonyaka xa ebiza umgca kaYesu kuPetros—Phambi kokuba umqhagi ukhale, uya kundikhanyela kathathu—xa uthetha naye. Greg malunga nokungcatshwa. Isiqendu 7 sade saphela ngoKen noNahomi bekwindawo ebiza uMariya noYesu Michelangelo’s Uvelwano . (Isilumkiso somonakalisi: NoYesu akaphumeleli kwincwadi yakhe ephila.)
Xa wayethetha ngoMhla wokuzalwa oMninzi kakhulu, u-Strong wavakala ngathi yinto enkulu yokuthumela umlingiswa wakhe. Iqala ngathi, 'Le iya kuba yeyona nto iphambili ebomini bakhe' kwaye emva koko iphele emazantsi nasekupheleni, utshilo. ET kwi-Intanethi . Kwi emva-kwi-scenes isici kwi-HBO, uStrong wathi:
Kukho amaxesha ambalwa kwi-Episode 7 ebeka ababukeli phezulu malunga ne-Kendall kunye nokuzilimaza. Okokuqala, wathiya iqela lakhe elithi The Notorious Ken Ready to Die. Emva koko, kamva, xa yonke into iye esihogweni, uKendall waxelela uNahomi ukuba ndinqwenela ukuba ... ngaphambi kokuba ahambe. Kamva walizalisa igama elithi ekhaya, kodwa ngekhe kothuke ukuba ebenokuthi ufile endaweni yoko.
Kwimizuzu yokugqibela yeSiqendu 7, uKen ujonge esixekweni ngaphambi kokuba uNahomi amtsale umva emphethweni. Umbono wakhe weVessel, umfanekiso oqingqiweyo weSixeko saseNew York owawukho ivaliwe ngokungapheliyo kweli hlobo emva kokuba umntu wesine ekhwele kuyo waza wafa ngokuzibulala.
ETuscany, akukho uNahomi wokutsala uKen umva ukusuka kumda.
U-Kendall, ewe, uxakene ne-ledges okwethutyana ngoku. Ngokudumileyo, kwi-Season 2 episode Safe Room umkhwa wakhe wokuma emphethweni we-Waystar Royco uphahla wacuthwa xa uyise efakela iglasi yokhuseleko.
oselula han solo alden ehrenreich
Kodwa uKen ebedanisa emphethweni isizini yonke. Zombini isiqendu sesine kunye nesesihlanu sale sizini savulwa ngoKen ejonge phantsi ukusuka ekuphakameni okukhulu.
Ke kucace gca ukuba uKen ebeya kufa ngeli xesha lonyaka Ukulandelelana akanakutyholwa ngokungawubeki umkhondo wesonka esinzima. Kodwa nangona Ukulandelelana libali losapho olungumvandedwa olulwela isithsaba, akunjalo Imidlalo yeethrone . Ayingomboniso loo nto ngokwesiqhelo iilori ekufeni okulusizi. Nangona kunjalo, uninzi lwamalungu eqela kunye nabasebenzi baye bachaza ixesha lonke ukuba i-stakes ye-final ezayo yayinkulu kunokuba nabani na unokulindela. Ethetha no IPrestige TV Podcast ekuqaleni kwexesha, uLogan Roy ngokwakhe, uBrian Cox, watsho :
[Umboniso] ubhekisa kwicala elithile kwaye ababhali bayawuvumela ukuba uye kwelo cala. Iba negazi elipheleleyo ngendlela engekabikho ngoku. Njengoko bathi: Awukaboni nto. Andikwazi ukukuxelela okokugqibela-kuba ndifungile ukuba ndingakuxelela ukuba zeziphi iziqendu ezibini zokugqibela. Kodwa uya kuthi: ‘Owu, wowu, iyamangalisa le nto.’ Yaye kum, yayindivuyisa gqitha kuba ndiye ndakwazi ukuzisa ekhaya izinto ebezibila kwiziqendu ezithathu.
Ukuba oko akwanelanga ukukukhathaza, umlingisi weGerri uJ. Smith-Cameron watsho kudliwano-ndlebe kwiveki ephelileyo ukuba isiphelo siza kuba buhlungu kakhulu … nokothusa kancinci.
Kodwa ngelixa kucacile ukuba Ukulandelelana inokubulala i-Kendall kwaye ibhale iStrong off the show, ephakamisa umbuzo we ngoba ingaba? UKendall ngumlinganiswa odume kakhulu kwaye uStrong uthathwa njengenye yabadlali abakhulu abasebenza ngoku. Ukulandelelana Kananjalo akubonakali ngathi luhlobo lomboniso wokugibelisa umlinganiswa othandekayo nje ukothusa nokothusa abaphulaphuli bayo.
hayi elona linki libuthathaka
Le yintelekelelo emsulwa, kunjalo, kodwa kukho iinkcazo ezimbalwa ezinokwenzeka apha. U-Strong unike udliwano-ndlebe oluninzi oluchaza indlela entywilayo ngayo inkqubo yakhe yokubambela. Kulo nyaka uxelele UMlondolozi : Andiziva ndingumdlali weqonga ngakumbi; Ndiziva ngathi ndiyisiqingatha sonyaka kwaye ndinguKendall kwisiqingatha sonyaka. Oko, ngokungafihlisiyo, kuvakala kudinisa kwaye akunakwenzeka ukuyigcina. U-Strong ukwandibetha njengohlobo lomdlali othanda umngeni wokuyixuba kwiindima ezahlukeneyo. Yakhe goofy, ukusebenza ngamatye njengetshantliziyo uJerry Rubin ngo-2020 Uvavanyo lwaseChicago 7 ibonisa ukuba ububanzi bayo bunjani. Abalawuli abanjengoAaron Sorkin, uGuy Ritchie, kunye noJames Grey bafola ukuze basebenze noStrong, mhlawumbi wayefuna inkululeko yokuguqula izihlunu zakhe ezibambeleyo kumacala ahlukeneyo.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba bobabini abanamandla kunye nababhali banokuvumelana nabanye abaphulaphuli ukuba sifumene yonke into esinokuyifumana kumjikelezo wokusetyenziswa kakubi kwe-Kendall kunye noyise. Mangaphi amatyeli esinokumbukela uKen ephakama ukuze abethwe ngasemva?
Kuya kufuneka sithi kukho enye into enokwenzeka yokwaphula umjikelo apha. Bobabini uCox kunye noStrong baye bathetha nge-Logan kunye ne-Kendall ye-gut-wrenching dinner scene kule ngqungquthela njengento enzima kakhulu ukuyihlanganisa. Ngoku ka zombini ye bona , USomandla waphuma iinyembezi ngelixa wayeyifota. Utshilo uMylod IPrestige TV Podcast ukuba lo mboniso wadutyulwa ngobusuku obubini kwaye wabonisa enye i-bravura ithatha kwi-Cox: Ukungabi namzamo apho [uLogan] wabonakala enikezela amandla kunyana wakhe kuphela ukuba athathe yonke into, yonke i-ounce yayo, yonke igram yayo, kwaye emva koko. uhambe nayo ibibuhlungu emphefumlweni. Sonke sasiyiva. Oku kungenakuthintelwa ngokupheleleyo malunga nokuba ngubani oza kuhamba kunye nebhaso.
Amandla uLogan abambe phezu kweKendall kuloo ndawo isikhumbuzo sengozi ebulalayo kaKen ekupheleni kwexesha le-1. Ndingcono kunawe, uKendall uqhankqalaza, kodwa uLogan uyambhangisa ekuphenduleni: Kwakude kube nini loo mntwana ephila ngaphambi kokuba aqalise. ukufunxa emanzini? Ngokuqinisekileyo, oku kunokukhokelela ekubhubheni kuka-Kendall, kodwa ngaba kunokukhokelela ekubeni uKendall angcangcazele akhululeke ekubanjweni nguyise kuye ngokuvuma ulwaphulo-mthetho kunye nokuya entolongweni? Mhlawumbi yonke intetho yentolongo kaTom ngeli xesha yayikhokelela ekuvalelweni komnye umntu.
Kodwa ngaba oko kuvakala ngathi kukuphela kweXesha lesi-2 kwakhona? Esinye isaziso sebhombu esivela kuKen? Mhlawumbi kukho enye indlela uKen akwenza ngayo oku ephila. Ukuba akenzi njalo, kuya kubonakala kunomdla kakhulu ukubona ukuba isiphelo sakhe siya kumchaphazela njani umzalwana omtyhaleyo ...
… udade owakha wamthuthuzela wasuka wamjikela ...
… kwaye, ngakumbi, notata owamtyhalayo waya kutsho apho wophuka khona.
Umxholo we-met gala 2019
Ndiphinde ndaziva kwakhona
ikhowudi yeebhili simmons meundies
Ndifuna ipitsa icothe
Ukunyuka kwenoveli yokuhamba esibhakabhakeni